नेपाली युवा जसको मेमोरी पावरले यसरी हल्लायो संसार ! दिमागभित्रै बनाए २५ हजार फोल्डर « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
अर्पण शर्मा कट्टेल तेज स्मणशक्ति भएका यस्ता युवा हुन्, जो वस्तुहरूको नामको लामो सूची एकचोटि हेरेपछि क्रम नटुटाई सरासर भन्न सक्छन् ।
यही प्रतिभाका कारण उनले गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्ड्समा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन् । उनले एक मिनेटमा ४२ वटा वस्तु चिनेर कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । सन् २०१५ सेप्टेम्बर २६ तारिखमा उनले यो रेकर्ड बनाएका थिए । उनले एक मिनेटमा ४० वटा वस्तुको नाम स्मरण गरेका थिए ।
नेपाली युवा जसको मेमोरी पावरले यसरी हल्लायो संसार ! अर्पण शर्माले गिनिज बुकमा नाम मात्र लेखाएनन् अहिले १ लाख नम्बर सम्झन उनले आफ्नो दिमागमा २५ हजार फोल्डर बनाएका छन् ! हेर्नुहोस हाम्रो कम्प्युटरमा भन्दा धेरै दिमागको फोल्डरमा के छ त्यस्तो हरेक परिक्षामा सफल हुन, क्यालेन्डर याद गर्न, कयौं फोन नम्बर कण्ठ पार्न उनको यस्तो जुक्ति रहेछ !